Ifulethi Le Corbusier - I-Airbnb
Ifulethi Le Corbusier
108 okushiwo abanye
Firminy, Auvergne-Rhône-Alpes, i-France
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Patrick Célia Et Leurs 2 Enfants
U-Patrick Célia Et Leurs 2 Enfants Ungumbungazi ovelele
Esakhiweni esisohlwini, woza ujabulele okuphindaphindiwe kwethu okungabonakali kwe-125 m2, ukuwela nokukhanya.
Iyunithi yokuhlala lapho indawo yokuhlala itholakala khona itholakala enhliziyweni yesayithi eliyingqayizivele e-Europe elihlanganisa isonto, indlu yamasiko, impumelelo yenkundla yomklami uLe Corbusier.
Eduze nedolobha lase-Firminy, ungathola ukuhamba okuhle kakhulu e-Loire Gorges; noma e-Pilat Regional Natural
1 balcony ikuvumela ukuba ujabulele umbono uphumule epaki ehlathini, omunye 2 ukunikeza umbono esontweni Le Corbusier.
Ngaphambi kwesakhiwo izindawo zokupaka eziningana ziseduze nawe. Ngemuva kwesakhiwo izingane zakho zingajabulela imidlalo yezingane nenkundla yebhola.
Umnyango wokungena uvulekela ephaseji elinamawodi angu-2. Ngemva kwalokho ungena endaweni yokuhlala enosofa ophethe umbhede nendawo yokufunda. Ngakwesokudla uzothola ikhishi elikhulu elivulekile elinetafula, i-flat pass edumile ye-Corbusier, ikhishi elihlotshisiwe (i-cooktop, i-microwave, i-oven, izitsha, umshini wekhofi, i-toaster....) isitebhisi siholela endaweni yasebusuku ekhonzwa ngumzila onamakamelo angu-2 e-mezzanine enye yayo inehhovisi futhi enye i-suite master. Ekupheleni komzila, indlu yokugezela yesibili enobhavu wekona, ekugcineni amakamelo okulala ezingane ezingu-2.
Idolobha Firminy kalula (isitimela noma expressway) itholakala 10 imizuzu kusukela Saint Etienne (Asse, idolobha design, ubuciko Museum yesimanje, imnyuziyamu yezimayini...), 70 km kusukela Lyon (sezindiza) futhi 70 km kusukela Puy en Velay, indawo Hijjimage. Eduze nesisekelo samanzi sase-Saint Victor sur Loire.
4.85 out of 5 stars from 108 reviews
4.85 · 108 okushiwo abanye
indawo efulethini lethu onqenqemeni ipaki enhle kusivumela ukuba sijabulele imvelo ngenkathi kokuba imizuzu engu-10 ukuhamba kusuka kuwo wonke amasevisi (izitolo, swimming pool cinema...).
Ibungazwe ngu-Patrick Célia Et Leurs 2 Enfants
Unenketho yokuxhumana nathi ngocingo nganoma yisiphi isikhathi.
UPatrick Célia Et Leurs 2 Enfants Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Firminy namaphethelo